Manchester United oo mid ka mid ah difaacyadeeda u isticmaalaysa sidii ay u soo qaadan lahayd Raphael Varane – Gool FM
Haaruun April 5, 2019
(Manchester) 05 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso inay difaaceeda Eric Bailly u isticmaasho dalab kasta oo ay Real Madrid kaga soo qaadanayso difaaca dhexe ee Raphael Varane.
Mustaqbalka garoonka Bernabeu ee Varane ayaa mugdi soo galay isbuucyadii dhowaa inkastoo macallinka Madrid ee Zinedine Zidane uu wariyey inuusan doonayn inuu lumiyo xiddiga xulka qaranka Faransiiska kula guuleystay Koobka Adduunka xagaagan.
Los Blancos ayaa lagu soo waramayaa inay dalbanayso lacag dhan 500 milyan oo euro oo dhiganta 429 milyan oo gini oo lagu burburin karayo ka hor inta aysan bedelin go’aankooda, laakiin Varane ayaa weli ah mid ka mid ah bartilmaameedka ugu sarreeya Man United oo isha ku haysa inay xoojiyaan daafacooda.
Red Devils ayaa kalsooni ku qabta inay Madrid ay ka iibinayso xiddigan, laakiin Wargeyska Daily Mail ayaana sheegaya inay isku dayi doonaan inay qiimo jaban ku soo qaataan xitaa marka lagu daro heshiiska Bailly.
Bailly ayaa si layaab leh bartilmaameed ugu noqday Real Madrid xagaaga oo 35 milyan oo gini ku doonaysa, macallin Zidane ayaa la fahamsan yahay inuu difaacan dhexe taageero u yahay tan iyo maalmihiisii Villarreal.
Labada kooxood ayaa la filayaa inay isbedel wayn ku sameyn doonaan kooxahooda xagaagan kaddib markii ay xilli ciyaareed niyad jab leh ku qaateen xilli ciyaareedkan kulammada horyaalladooda.
Man United ayaa tartan adag oo ku aaddan raadinta Varane kala kulmi doonta kooxaha Juventus iyo Paris Saint-Germain ay dhankooda xiisaynaya xiddigan.
“Waxaan dooneynaa in qandaraas cusub ee abid ah aan ka saxiixano Messi” - Josep Maria Bartomeu